ဓါတ်ပုံ - Androidsis | Androidsis
ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ပြုလုပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ဤကဏ္တွင်ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့ရမည်။ Android ပေါ်ရှိဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်းများမှဓာတ်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သောလည်ပတ်မှုစနစ်ရှိအပလီကေးရှင်းများသို့ရောက်ရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များအထိ။
Android တွင်ဓာတ်ပုံနှင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားသောအရာအားလုံးကိုဤအမျိုးအစားတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သတင်းများ၊ လှည့်ကွက်များ၊ သင်ခန်းစာများနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာအတွက်အကြံပြုချက်များသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
Android အတွက်ဓာတ်ပုံများ၏နောက်ခံပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံး app ၄ ခု
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
ယနေ့ခေတ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအဓိကအသုံးပြုမှုများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
Instagram သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Facebook နှင့် Twitter တို့နှင့်အတူ၎င်းသည် ...
VSCO သည်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းလုပ်ဆောင်သည်။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Photoshop Camera ကိုအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းအဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မကြာသေးမီကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောအကောင်းဆုံး filter များ၊ Lightroom မှ ...
PS Camera နှင့်သင်ရိုက်သည့်ဓါတ်ပုံများတွင်ထောင့်အကျယ်နှင့် timer နေရာကိုယခုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ
PS Camera သည်လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်လက်ရှိစစ်ထုတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး app အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူထားရှိသည်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာ ...
အစားအစာဓာတ်ပုံများ - သင့်မိုဘိုင်းဖြင့်အကြံပေးချက်များ၊ လျှောက်လွှာများနှင့်လှည့်ကွက်များ
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
အစားအစာ၏ဓာတ်ပုံများသည် Instagram နှင့်အခြားသူများအပေါ်တွင်အမှန်တကယ်ထိခိုက်မှုဖြစ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါ။
[ဗွီဒီယို] သင်၏ Android မိုဘိုင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးပုံတူဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း
Galaxy Note 10+ ဖြင့် Android မိုဘိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးပုံတူဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်ပေးမည်။
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်စက်ရုံ၌တပ်ဆင်ထားသည့် application များ၏စွမ်းအားကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သူတို့ကအပြင်, အတော်လေးစွယ်စုံဖြစ်ကြသည် ...
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဓာတ်ပုံများရရှိနိုင်ပါသည်၊ ၎င်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုဟုလည်းလူသိများသော ...
Krita သည် Android ကို Photoshop အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်လာသည်
လူအများအပြားသည် Android တွင်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာများကိုရှာဖွေနေကြသည်၊ အများစုမှာလခ ပေး၍ ...
ဒီနေ့ ၂၄ နာရီကင်မရာနဲ့ကပ်ထားတယ်။ နေ့တိုင်းငါတို့လက်ထဲမှာဖုန်းတွေရှိတယ်။
[APK] Photoshop Touch သို့မဟုတ် Android အတွက်အမှန်တကယ် Photoshop ဖြစ်သင့်သည်
[APK] ဂူဂဲလ်ကင်မရာကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနည်း။ (Play စတိုးတွင်မရရှိနိုင်ပါ)